Tuesday January 24, 2017 - 09:45:42 in Wararka by Super Admin
Fatxu Shaam ayaa bayaan ay ku faafisay Baraha Internetka waxay ku sheegtay in Fasiilka Jihaadiga Jundul Aqsaa uusan maamul ahaan hoos tagin iyaga kadib markii saraakiisha fasiilka iyo ciidanka ay diideen in ay u hoggaansamaan siyaasadda iyo maamulka Fatxu Shaam.
Jamaacada Fatxu Shaam ayaa sidoo kale sheegtay in ay iska fogeysay Junduql Aqsaa maamul ahaan kadib markii ay aragtay in uusan u hoggaansameyn awaamirta Hoggaanka Jabhadda ayna dhici karto in ay dib usoo laabtaan dagaalladii kala dhaxeeyay kooxaha kale ee gobolka Idlib ku sugan.
Balse Jabhaddu bayaankeeda waxay ku caddeysay in Jundul Aqsaa uu kala dhaxeeyo xiriirka Islaamnimo iyo midka Jihaadiga ah.
Bayaanka Kasoo Baxay JF Shaam Ex. Jabhadda Al Nusrah ayaa lagu muujiyay walaaca ay jabhaddu ka qabto in ay dib usoo laabtaan isku dhacyadii u dhaxeeyay Jundul Aqsaa iyo xarakada islaamiga Axraaru Shaam.
Bishii October, 2016 ayay aheyd Markii Jundul Aqsaa iyo Fatxu shaam ay midnimo buuxda gaareen xilligaas oo gobollada Idlib iyo xammaah ay dagaallo culus ka dhaceen.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya kacdoonka Suuriya ayaa sheegaya in kooxda Jundul Aqsaa ay wali tahay mid isku xiran waxayna bilihii lasoo dhaafay heshay boqolaal dhalinyaro Jihaadiyiin ah oo safkeeda kusoo biiray.
Mareykanka ayaa Horay Fatxu Shaam iyo Jundul Aqsaa ugu daray liiska Argagaxisada, iyadoona xoogag katirsan Mucaaradka Dhax-dhaxaadka ah ay ku goodiyeen in ay dagaal ku burburinayaan kooxda haddii ay isdhiibi wayso.